“Wakhtiyaddii Dugsiga Sare iyo Ciyaaraha (Sportska)…..” Jamaal Cali Xuseen | Hayaan News
“Wakhtiyaddii Dugsiga Sare iyo Ciyaaraha (Sportska)…..” Jamaal Cali Xuseen
“Balwad haydiin noqoto wax akhriska iyo sportsku weeye fariintaydu,…..”
Hargeysa(Hayaannews): Sawirka aad halkan ka aragtaan waa Jamaal Cali Xuseen oo 17 jir ah dhigtana dugsiga sare ee Faarax Oomaar (Secondary School) ee ku yaalla magaaladda Hargeysa. Waa sideetamaadkii. Magaaladda Hargeysa waxay ka soo kabanaysey kacdoonkii dhalinyaradda ee dhagaxtuurka ee February 1982 kii ka dhacay magaaladda. Inkastoo ay siyaasadda dalku ay cakirneyd oo jabhadihii dalka ka bilaabmay ee SNM iyo SSDF ay dardar wadeen, weli dalku wuu xasiloonaa ilaa xad. Tartankii xiisaha badnaa ee ciyaaraha goboladda ee sanadkiiba hal mar la qaban jiray wuxuu ahaa mid xamaasad weyn leh oo aad loo xiiseyn jiray. Sawirka iyo maqaalkan maantuba ujeedadda ka danbeysa iyo fariinta ay gudbinayaan wuxuu isugu jiraa dhiirigelin jiilkan maanta ah iyo xusuusta taariikhdii la soo maray iyo siday u ahayd aniga iyo jiilkayga magaaladda Hargeysa.
Inta badan wakhti nagama lumi jirin oo maqaaxiyaha waanu ku yarayn. Xilliyadaasi wiigii hal habeen baanu fadhiisan jirnay maqaaxiddii Ina Garow. Xataa habeenkaasi waxaan dhegaysan jirnay Ilaahay haw naxariistee Aadan Daraawiish oo lecture maqaaxida ka bixin jiray kaa soo laftigiisu aqoon ahaa. Wakhtigaygu wuxuu ahaa mid qiyaasan oo xilli aanu wax akhrisanayno iyo xilli aanu sports ku hawlan nahay buu ahaa. Buugaagta cilmigga iyo jariiradaha waanu kala amaanaysan jirnay. Ilaahay haw naxariistee Naasir Cabdi Askar oo aanu Sheekha ugu yeedhi jirnay isku fasalna ahayn Faarax Oomaar ayaa walaaladdii oo ka waaweyni jariirado loo keeni jiray oo uu Naasir kutubta, Magazines (nuquladaba), iyo buugaagtaba nooga soo qaadi jiray. Waxaa jiri jiray in Samaters Bookshop oo ku yaalay faras magaalaha Hargeysa oo iibin jiray waxkasta oo buugaag iyo wargeysyo caalamiya oo si joogto ah u keeni jiray Magazaines (Nuquladda) waaweyn ee caalamka sida News week, Time Magazine iyo Readers Digest. Waxaanu sameyn jirnay intaanu lacagta urursano oo isku dardarno ayaanu soo iibsan jirnay. Ingiriisidda ku qorneyd aad bay noogu adkeyd laakiin waanu khasbi jirnay. Weliba aniga Samaters Bookshop wuxuu ii ahaa address oo waraaqaha ii yimaadda waxa laygu soo hagaajin jiray boxkooddii P.O.Box 62. Beryhaasi waxaanu lahaan jirnay Penpals ama dhalinyaro caalamka joogga oo aanu waraaqaha isku qori jirnay oo midba midka kale ku bari jiray dalkiisa. Sida waxa heshay Shabakada Wararka ee #Hayaannews